Jacaylku wuxuu inagu dhaqaajiyaa inaan danta dadka kale mar walba hormarino
Dhammaanteen waxaynu nahay qoys qudha ah, farcankii ninkii ugu horreeyay Adan. Inkastay kuwa isku qoyska ah laga fili karo inay isjeclaadaan oo isixtiraamaan, way adag tahay in dunida laga helo jacaylka noocaas ah. Sidani ma ahan siduu Ilaaheenna kalgacaylka badan doonayay.
MUXUU QORNIINKA QUDUUSKA AH KA YIRI JACAYLKA?
“Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay oo kale.”—LAAWIYIINTII 19:18.
“Cadowyadiinna jeclaada.”—MATAYOS 5:44.
MAXAY KA DHIGAN TAHAY IN DADKA LA JECLAADO?
Bal eeg siduu Ilaahay micnaha jacaylka ugu sharxay aayadaha ku qoran 1 Korintos 13:4-7:
Bal tan Ka feker: Sidee baad dareentaa markay dadka kale samir iyo raxmad kuu muujiyaan oo qaladyadaada ka cadhoonin?
Bal tan Ka feker: Sidee baad dareentaa markay dadka kale xaasid kugu noqdaan oo ku aamminin?
Jacaylka ‘nafsaddiisa wax uma doondoono.’
Bal tan Ka feker: Sidee baad dareentaa markay dadka kale aragtidaada ixtiraamaan oo aynan kugu qasbin doonistooda?
Jacaylku ‘shar kuma fikiro.’
Bal tan Ka feker: Ilaahay diyaar ayuu u yahay inuu dembidhaafo kuwa toobad keeno. “Isagu had iyo goor wax canaanan maayo, oo sii cadhaysnaan maayo ilaa weligiis.” (Sabuurradii 103:9) Aad baan u faraxnaa markii qof aan qalad ka galnay ina cafiyo oo shar inoogu fekerin. Innaga xitaa waa inaan diyaar u ahaanno inaan cafinno qaladyada dadka kale.—Sabuurradii 86:5.
Jacaylku “xaqdarrada kuma farxo.”
Bal tan Ka feker: Markay xumaan inagu dhacdo, ma jeclin inay dadka kale inagu farxaan. Sidoo kale innaguna ma aha inaan ku faraxno dhibaatadooda, xitaa haddii ay si xun inoola dhaqmaan.
Helidda barakada Ilaahay waxay ku xiran tahay inaan dadka oo dhan siyaabahan u jeclaanno. Hal hab aan u muujin karno jacaylka noocan ah wuxuu yahay inaan u gargaarno kuwa baahan.
Wadaag Wadaag Sidee Jacayl Ugu Muujin Karnaa Dadka Kale
wp20 Lambar 3 bog 12